6 Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti: 2 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana murume kana mukadzi akaita mhiko chaiyo kuti ararame somuNaziri+ kuna Jehovha, 3 anofanira kurega waini nedoro rinodhaka. Haafaniri kunwa vhiniga yewaini kana vhiniga yedoro rinodhaka,+ kana kunwa chero chinwiwa chipi zvacho chinogadzirwa nemazambiringa, kana kudya mazambiringa, angava manyoro kana kuti akaomeswa. 4 Mazuva ose ouNaziri hwake haafaniri kumbodya chero chinhu chipi zvacho chinogadzirwa nemazambiringa, chinogadzirwa nemazambiringa asina kuibva, kunyange makanda acho. 5 “‘Mazuva ose emhiko youNaziri hwake iye haafaniri kuveura musoro wake nechisvo;+ kusvikira mazuva aanofanira kutsaurirwa kuna Jehovha akwana, anofanira kuva mutsvene nokurega bvudzi+ romusoro wake richireba. 6 Haangaswederi kumweya chero upi zvawo wakafa+ mazuva ose aanoramba akatsaurirwa Jehovha. 7 Haangazvisvibisi nokuda kwababa vake kana amai vake kana munun’una wake kana hanzvadzi yake pavanofa,+ nokuti chiratidzo chouNaziri kuna Mwari wake chiri pamusoro wake. 8 “‘Iye mutsvene kuna Jehovha mazuva ose ouNaziri hwake. 9 Asi kana munhu akangoerekana afa ari pedyo naye+ zvokuti anosvibisa musoro wouNaziri hwake, ngaabve aveura+ bvudzi romusoro wake pazuva raanofanira kunzi akachena. Anofanira kuriveura pazuva rechinomwe. 10 Pazuva rechisere anofanira kuuya nemagukutiwa maviri kana hangaiwa duku mbiri kumupristi pasuo retende rokusanganira.+ 11 Mupristi anofanira kubayira imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi+ uye imwe yacho ive chinopiwa chinopiswa,+ omuyananisira, zvaanenge atadza nokuda kwomweya wakafa. Ngaabve anatsa musoro wake pazuva iroro. 12 Anofanira kurarama somuNaziri+ kuna Jehovha nokuda kwemazuva ouNaziri hwake, uye anofanira kuuya negondohwe duku rine gore rimwe chete kuti rive chinopiwa chemhosva;+ uye mazuva ekare haazoverengwi nokuti iye akasvibisa uNaziri hwake. 13 “‘Zvino uyu ndiwo mutemo pamusoro pomuNaziri: Pazuva rinokwana mazuva ouNaziri hwake,+ anofanira kuendwa naye kusuo retende rokusanganira. 14 Anofanira kupa Jehovha gondohwe duku rimwe chete, rakanaka, rine gore rimwe chete, kuti rive chinopiwa chake chinopiswa+ negwayana gadzi rimwe chete, rakanaka, rine gore rimwe chete kuti rive chinopiwa chechivi+ uye gondohwe rimwe chete rakanaka kuti rive chibayiro chokugoverana,+ 15 netswanda yemakeke akaita serin’i asina kuviriswa efurawa yakatsetseka,+ yakakanyiwa nemafuta,+ nezvingwa zvitete zvisina kuviriswa zvakazorwa mafuta,+ nechinopiwa chazvo chezviyo+ nezvinopiwa zvazvo zvezvinonwiwa.+ 16 Mupristi anofanira kuuya nazvo pamberi paJehovha, opa chinopiwa chake chechivi nechinopiwa chake chinopiswa.+ 17 Achapa Jehovha gondohwe kuti rive chibayiro chokugoverana+ pamwe chete netswanda yemakeke asina kuviriswa; uye mupristi anofanira kupa chinopiwa charo chezviyo+ nechinopiwa charo chinonwiwa. 18 “‘Zvino muNaziri wacho anofanira kuveura+ musoro wouNaziri hwake ari pasuo retende rokusanganira, uye anofanira kutora bvudzi romusoro wouNaziri hwake, oriisa pamoto uri pasi pechibayiro chokugoverana. 19 Mupristi anofanira kutora bandauko rakabikwa+ pagondohwe racho nekeke rimwe chete risina kuviriswa rakaita serin’i mutswanda, nechingwa chitete chimwe chete chisina kuviriswa,+ ozviisa muzvanza zvomuNaziri pashure pokunge aveura chiratidzo chouNaziri hwake. 20 Mupristi anofanira kuzvizunguzira kuti zvive chinopiwa chinozunguzirwa pamberi paJehovha.+ Izvo chinhu chitsvene kumupristi, pamwe chete nechityu+ chechinopiwa chinozunguzirwa nebandauko romupiro.+ Pashure paizvozvo muNaziri anganwa waini.+ 21 “‘Uyu ndiwo mutemo pamusoro pomuNaziri+ anopika—chinopiwa chake kuna Jehovha nezvouNaziri hwake, tisingabatanidzi zviya zvaanogona kupa. Maererano nemhiko yake yaangaita, anofanira kuita saizvozvo nokuda kwomutemo wouNaziri hwake.’” 22 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 23 “Taura naAroni nevanakomana vake, uchiti, ‘Munofanira kukomborera+ vanakomana vaIsraeri seizvi, muchiti kwavari: 24 “Jehovha ngaakukomborere,+ akuchengete.+ 25 Jehovha ngaaite kuti chiso chake chipenye kwauri,+ uye ngaakunzwire nyasha.+ 26 Jehovha ngaasimudzire chiso chake kwauri,+ akupe rugare.”’+ 27 Vachaisa zita rangu+ pavanakomana vaIsraeri, kuti ini ndivakomborere.”+